Puntland oo digniin ku socota gobolada Sanaag iyo Haylaan u dirtay Somaliland.
June 8, 2021 Xuseen 13
Wasaaradda waxbarashada Puntland ayaa Maanta soo saartay Go’aan ay ku joojisay in Gobolada Sanaag iyo Haylaan dhinaca xiga dhankeeda la geeyo Imtixaanaadka Shahaadiga oo ay qaadeyso Somaliland.
Nijaas qurman imi Geylan
macana yere maley xadhig ku dabe muranle naagoodle .
macaan iyo qadhaadh aan is geyn meel isugu geeye maseyrkii tolkii lagu nacey, iyo gabey majeerteenlemajeerteenle .kkkk
ma adigaa malkadii sanaag moodhar ku tegi kara ,soo in aan maanka ku Jari miimka ku taalo, kkkkk
Dhakhdaland dhalfada aan gashee dhuuso laga keenay
Wallaahi Pudhlayn waxa hodaya dulqaadka Somaliland iyo ka cararka dhiig soomaaliyeed.
Somaliland dhulkeeda miyay u sheegi siday ka yeelayso??
Hal mar oo arimuhu faraha ka baxaan wallaan Puntland dambe laga maqlayn Sanaag Bari??
Aar kuwaanaa dhabayaco faan iyo faatabakh.. dhoobadareed maxuu yidhi BUqlayn way iska sheegay Oo ku faantay in Sanaag ka hor istaagtay dooorashada idoorka Lkn dadka seegaankaa diiday
Buqlayn iyo faan xaaa kalahaysta
Abshir buqaari midka layiraahdo ee jaajuska
Heritage baan ushaqeeyaa
Wuu ku fanayaa rufuyaan
Baan ahay waxuusan ogayen
Dadku in aay asaga kahoreeyan
Maxaa kagalay ciidanka
Somalia iyo qorida ciidanka
Dad baa uxilsaaran arinkaas
Inkaas oo kale waa in laxiraa
Un iyo aduunka sirta
Ciidanka waxa siiyo
Waa Abshir buqaari
Magaca uu wato oo buqaari
Ayaan kaxumahay tuugaas
IIDOORKA IYO KUFRIGA WACAD ALLE U YAALE
WAA DUUL WALAALO AH TAN IYO WAAGA AAKHIRO E.
IIDOOR MARQAAN KINTIR AYAA IDINKU BAXAY WAA LA IDINKU JARAYAA.
Nolosha dadka kolka ay timaado in ciyaar ciyaarta laga daayo ayaa wacan. Puntland imika waxay ku khamaareysaa shahaadooyinka dhalaanka. Ardaydu waxay joogaan dhulka Somaliland. Iskuulada iyo waxbarasha waa ka Somaliland. Manhajka, Iskuulada, macalimiinta iyo wax kasta oo kale Somaliland ayay ku xidhan yihiin.
Talaabadani labo siyaalood ayay keeneysaa. Ardeyda sanadaha badan dedaalka iyo xarbiga ku jirey oo ay seejiso shahaadooyinkooda iyo isku dhac.
Daandaansiga cad waxba ku qaadi kari mayso. Haduu isku dhac yimaadana Puntland sidii lagu yaqaanay ayay intay faraha ka laabato dadka degaanka kuwooda ay soo hurineyso ayay dadka ha’is difaacaan odhani.
Waxaas oo dhana waxa ka keenaya hinaasaha ay ka hinaastay Guulihii badnaa ee ay Somaliland gaadhay.
ma sheekadaa ayaad keentay, markaad itaal kale wayday…..kkkkk
Mubarik DHILO Iidoor CAAY IYO NIJAASO socota ayaad tahay.
AHMED shiine sool iyo sanaag waxaa DEGA harti daarood.
Ciyaalka Iidoor ee marqaanka ku bilaaba 7 JIR school u DHIGA not ardeey daarood.
Banto wa ceeb
Yaa degan oo xukuma caasimada Sanaag?
wersengeli waa xoolo, maamulkan yar ee majeerteeniya waxa uu ka dhigay bilaa xildhibaan doorashadii Somaliland, maantana waxa uu rabaa inuu ciyaalkooda bilaa shahaado ka dhigo, wesengeli ma is weydiiyey ciyaalkaagu haday imtixaanka Iyo shahaadada Somaliland diidaan in aanay jaamacadaha Somaliland geli karin ayna xamar ka doonaanan shahaada Somalia? Bal iska daaya imtixaanka Somaliland ha gelinee in Somaliland wax u noqoto .
Warsangeli iyaga iska dhigay bilaa Baarlamaan. Hadey is habeyn lahaayeen oo ay is abaabuli lahaayeen 3-4 xildhibaano ayaa usoo bixi lahaa. Laakiinse iyagoon si baaxad Leh isku diiwaan gelin ayay musharaxyo badana isasoo barbar yaaciyeen. Dabadeedna Wey isla wada degeen.
Tan shahaadadu waa wax kale. Waa arin xun oo ay dhalaankaas ku seejinayaan shahaadooyinkooda. Laakiinse yaa dheh jalaq u siinaya. Somaliland Wey geyneysaa imtixaanka. Iyaguna Wey geli doonaan.